September uyu isu yakabudiswa pfupi firimu uye Album inonzi “Man Up” kupikisa majaya kuti vanhu. Pano vhidhiyo mumhanzi nokuda “Man Up Anthem.” You can purchase the short...
Kune vamwe vanhu vane zvakanaka pane zvimwe zvinhu. Kune Basketball vatambi vanoridza mumitambo kwemakore nemakore uye vapedza mabasa avo akapfuma uye vafare. They wanted...
Heinoi ekuteerera kubva chirongwa ndakadzidzisa kwokutanga gore rino pamusoro pekuparidza akatendeka. The Evangelist Faithful nokuda BragOnMyLord Nokuti avo pfupi iri nguva, pano pfupiso pfungwa: 5 Characteristics of...
Nokuti vaya ndamboona vhidhiyo rwiyo rangu "The Invasion (gamba)” pano riri. Nakidzwa! Ndinovimba kunokubatsira kuramba maziso ako pamusoro Kristu.
Nei ini Nemba Naizvozvo Young?
Nezuro ndakaita kunonoka usiku vanorega pachitoro kubata zvinhu zvishoma uye ndaiva kunakidza chaizvo kukurukura pamwe keshiya. We made small talk as she scanned my...
Ose zvino ndoenda shure uye kuteerera Albums uye nziyo yaifamba chaizvo ini artistically uye mumudzimu ndikanzwa apo navo. One of those albums is The Solus Christus Project by Shai...